Sunday May 23, 2021 - 12:06:42 in Wararka by Liibaan Jeexoow
waa astaanka xafiiska siyaasadda iyo wilaayaatka XSHM
Kulamada oo ay barbar socotay dowro diini ah ayaa diiradda lagu saarayay xaaladaha ka jira dalka Soomaaliya gaar ahaan duullaanka dalka lagusoo qaaday.
Gabagabadii kulamadaasi ayay labada dhinac ku dhawaaqeen in ay gaareen heshiis buuxa, munaasabad heer sare ah kadib ayaa la iclaamiyay in lasoo xiray dowro loo qabtay odayaasha beesha Qubeys waxaana dowradaas loogu magac daray dufeyl ibnu cammar Aldowsi.
Waxyaabaha lagu heshiiyay waxaa kamid ah in dhulka ay degto beesha uu kusoo biiray wilaayaatka islaamiga ah ee shareecada islaamka lagu maamulo.
Sheekh Xuseen Cali Fiidoow oo katirsan mas'uuliyiinta sare ee XSHM ayaa ugu horrayn ka hadlay munaasabadda wuxuuna shaaciyay wixii lagu heshiiyay.
Halkan ka dhageyso Kalimadda Sheekha MP3
Macallin xasan oo ah Naqiibka guud ee beesha qubeys ayaa madashii kulanka ka caddeeyay in Qubeys iyo shabaabul Mujaahidiin ay heshiis buuxa gaareen wuxuuna hoggaanka xarakada ku amaanay sida mas'uuliyadda leh oo ay kaalintooda ugasoo dhalaaleen.
Halkan ka dhageyso Hadalka Nabadoonka MP3
Deegaanada ay degto beesha Qubays ayaa dhamaantood waxay kusoo biireen dhulka baaxada leh ee ay maamusho Wilaayada Islaamiga ah ee Mudug.
Sheekh Xasan Yacquub Cali waaligii hore ee wilaayada Galguduud oo munaasabadda kalimad ka jeediyay ayaa ka shanqariyay in wixii hadda ka dambeeya ay deegaannada beesha qubeys degto ay kusoo biireen wilaayaatka islaamiga ah.
Halkan ka degso kalimadda Sheekh Xasan MP3
Waxgaradka iyo culimada Beesha ayaa madasha ka sheegay in ay ku faraxsanyihiin in deegaanadooda ay gaarto shareecada islaamka iyagoona beelaha ladariska ah ugu gacan haatiyay in ay qaataan tallaab lamid ah midda qubeys oo ay Jihaadiyiinta soo dhoweeyeen.
dhageyso codka Nabadoon katirsan beesha Qubeys MP3
Sheekh Xasan Abuu Xamza oo ah waaliga wilaayada Mudug ayaa si diirran usoo dhoweeyay heshiiska lagaaray wuxuuna dardaaran qiima badan ujeediyay beesha Qubeys.
Halkan ka dhageyso kalimadda waaliga Mudug MP3
Horraantii bishii Ramadaan ee lasoo dhaafay ayay ciidamada Al shabaab si buuxda ula wareegeen gacan ku heynta degmada Bacaadweyne iyo dhammaan deegaannada hoos yimaad kadib bilo ay halkaas kula dagaallaamayeen maleeshiyaad dabadhilifyo khawana ah oo shisheeyuhu uu soo dirsaday.
Al Shabaab oo sheegtay Mas'uuliyadda sarkaal lagu weeraray isgoyska KM4.